शरद - Best of Japan
यस पृष्ठमा, म अक्टोबरमा होक्काइडोको मौसम वर्णन गर्दछु। यस अवधिमा होक्काइडो शरद inतुमा छ। अक्टुबरको मध्यदेखि सप्पोरो जस्ता शहरहरूमा शरद पातहरू सुन्दर छन्। जे होस्, यो बिहान र बेलुका चिसो छ, त्यसैले कृपया तपाइँको जाडोका लुगालाई सूटकेसमा राख्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। अक्टूबरमा टोकियो र ओसाकाको मौसममा लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। अक्टूबरमा होक्काइडो बारे प्रश्न-उत्तर होक्काइदोमा अक्टोबरमा हिउँ पर्दछ? हिउँ डाइसेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्दछ। सप्पोरो जस्ता मैदानहरूमा पनि, कहिलेकाहीं अक्टुबरको अन्तमा पहिलो हिउँ पर्दा यस्तो अवसरहरू हुन्छन्। यद्यपि अक्टुबर मूलतः मैदानी मैदानमा शरद seasonतु हो। के अक्टोबरमा होक्काइडोमा फूलहरू फुलिरहेका छन्? फूल फुल्ने मौसम बितिसकेको छ, तर अक्टोबरको बीचमा तपाईं केही फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं दूरीमा हिउँ पर्ने पहाडहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अक्टूबरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? होक्काइडो अक्टोबरमा छोटो गिरावट हो। यद्यपि अक्टोबरको पछिल्लो बिहान र बेलुका तापक्रम5डिग्री सेन्टिग्रेडमा झर्नेछ र लामो जाडो नजिक आउँदैछ। अक्टूबरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? पतनका वस्त्रहरू अक्टुबरको पहिलो आधामा तयार गर्नुपर्दछ, तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि अक्टोबरको पछिल्लो भागमा पनि कोट ल्याउनुहोस्। कृपया निम्नलाई सन्दर्भित गर्नुहोस् ...
अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म जापानमा अद्भुत शरद seasonतु जारी छ। यो अक्टुबरमा ओसाकामा तुलनात्मक रूपमा चिसो हुनेछ, र राम्रो मौसम जारी रहन्छ। अक्टुबरमा, यो ओसाकामा यात्रा गर्न उपयुक्त समय हो भनेर भन्न सकिन्छ। यद्यपि, भर्खरको मौसम पूर्वानुमानका बारे सचेत हुनुहोस् किनकि एक अन्धकार आउँदो आउँदैछ। यस पृष्ठमा, म अक्टुबरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। अक्टूबरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसममा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। अक्टोबरमा ओसाकामा मौसम (सिंहावलोकन) ग्राफ: ओसाकामा अक्टोबरमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) यस पृष्ठमा म जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको ओसाकाको अक्टुबरको मौसम डेटा निम्न रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। यो डाटालाई हेर्दै, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि अधिकतम तापमान एकदम उच्च छ। निश्चित रूपमा, अक्टुबरको पहिलो आधामा, त्यहाँ दिनहरू छन् जब अधिकतम तापमान २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। जे होस्, ती विशेष गर्मी दिनहरू बाहेक, अक्टुबरको पहिलो आधामा, हामी धेरै शान्त महसुस गर्छौं र यस्तो देखिन्छ कि पूर्ण विकसित फ्लाग शरद arrivedतु आइपुगेको छ। सेप्टेम्बरमा धेरै वर्षा भयो र आँधीबेहरी आयो, तर मौसम ...
यदि तपाईं अक्टुबरमा टोकियोमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो उत्तम चीज हो, म दृढ रूपमा सहमत छु। अक्टुबरमा टोकियो सहज छ। तपाईं विभिन्न स्थानहरूको वरिपरि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म अक्टुबरमा टोकियोको मौसम वर्णन गर्दछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अक्टोबरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। शरद clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। अक्टुबरमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: अक्टूबरमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन te जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) अक्टुबरमा त्यहाँ धेरै दिनको राम्रो मौसम छ र तापक्रम सहज छ। यद्यपि यसमा थोरै वर्षा भएको छ, यो खर्च गर्न सजिलो छ, त्यहाँ श doubt्का छैन जुन यो एक भ्रमणको मौसम हो। अक्टुबरको शुरुमा, आँधीले अझै आक्रमण गर्न सक्दछ। तपाईं यस बारे सावधान हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस बाहेक अक्टुबरको मौसम सामान्यतया शान्त हुन्छ। टोकियो शहरको केन्द्रमा, शरद पातहरु अझै शुरू भएको छैन। यद्यपि शरद पातहरू सुरू भएनन्, नोभेम्बरको तुलनामा त्यहाँ अझै धेरै पर्यटकहरू छैनन्। मलाई लाग्छ कि यो अक्टुबर हो कि यात्री सबैभन्दा रमाईलो यात्रा गर्न सक्दछ। यदि तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ भने ...
यदि तपाई शरद Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नु पर्छ? यदि यो शरद isतु हो भने, यो सेप्टेम्बर, अक्टुबर वा नोभेम्बरमा भर पर्दै वस्त्रहरू फरक फरक हुन्छन्। यस पृष्ठमा, म जापानी को शरद clothesतु कपडा ठोस फोटो संग परिचय गर्दछु। तपाईको यात्राको लागि तयारी गर्दा कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्। लुगा तयार पार्न तपाई कुन महिना यात्रा गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ शरद hotतु तातो गर्मी देखि चिसो जाडोमा संक्रमण अवधि हो। शरद Inतुमा, यो बिस्तारै चिसो हुनेछ, त्यसैले तपाइँको लुगाहरू एकदम फरक हुनेछ तपाइँ कुन महिना यात्रा गर्ने आधारमा। यदि तपाइँ सेप्टेम्बर को पहिलो आधा मा यात्रा, जापान को जलवायु अझै पनि राम्रो गर्मी छ। धेरै जापानीहरू अझै पनि यस अवधिमा छोटो-बाहुको शर्ट लगाएका छन्। यद्यपि, वर्षाका दिनहरू बढ्दै जाँदा, आँधी पनि आउँदछ, त्यसैले त्यहाँ चिसो दिन पनि छ। कार्डिगनहरू, मुख्यतया महिलाहरू जस्ता कोट लगाउने मानिसहरू विस्तारै बढ्नेछ। सेप्टेम्बरको उत्तरार्धमा, कूलर दिनहरू बिस्तारै बढ्नेछ। धेरै व्यक्तिहरू शरद clothesतुका लुगाहरू लगाउँछन्, शरद fashionतु फेसनमा रुचि राख्ने युवा युवतीहरूको साथ। अक्टुबरमा, ओकिनावा र अन्य बाहेक केही व्यक्तिले छोटो-बाहुको शर्ट लगाउँदछन्। होक्काइडो वा होन्शुको उच्च भूमिमा शरद् पातहरू भेट्न आएका पर्यटकहरूले ज्याकेट, जम्पर लगाउने छन् र यस्तै अरू पनि लगाउँदछन् कि तिनीहरू चिसो मौसममा पनि ठीक हुनेछन्। नोभेम्बरको पहिलो आधामा, अधिक व्यक्तिहरूले ज्याकेट, जम्परहरू लगाउनेछन्। नोभेम्बरको उत्तरार्धमा, जाडो धेरै नजिक छ। कोट लगाउने व्यक्तिहरू सहरी क्षेत्रमा पनि बढ्छन्। माथि ...
यदि तपाईं अक्टोबरमा जापान मा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, कस्तो प्रकारको दर्शनीय स्थल सब भन्दा राम्रो छ? हरेक वर्ष अक्टोबरदेखि नोभेम्बर सम्म जापानमा पूर्ण शरद haveतु हुन्छ। यदि तपाईं सुन्दर शरद leavesतु पातहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, शरद पातहरू क्योटो र नारामा त्यति सुरु भएको छैन, त्यसैले म तपाईंलाई थोरै चिसो क्षेत्रहरू जस्तै होक्काइडो र तोहोकु क्षेत्र भ्रमण गर्न सिफारिस गर्दछु। अर्कोतर्फ, क्योटो र नारा अझै नोभेम्बरमा जत्तिकै भीडले भरिएका छैनन्, त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईं आरामदायी भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। अक्टूबरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी यदि तपाईं अक्टुबरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र अधिक जानकारी हेर्न जानुहोस्। होक्काइडो वा होन्शुमा हाइल्यान्ड्समा शरद पातहरूको आनन्द लिनुहोस् होक्काइडो युनिभर्सिटी सप्पोरो शहर होक्काइडो जापानको शरद streetतुमा २ October अक्टुबर २०१ 26 मा = शटरस्टक यदि तपाईं अक्टुबरमा प्रामाणिक शरद leavesतु पातहरू हेर्न जान चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि होक्काइडो वा उच्च भूमिमा। हुनशु। मेनल्याण्डका प्रमुख शहरहरू, जस्तै टोकियो, अक्टुबरमा अझै शरद intsतु टिप्स छैन। अर्कोतर्फ होक्काइडो (शापुरजस्ता शिपोरो लगायतका क्षेत्रहरू) र होन्शुको उच्च भूभाग अक्टुबरमा शरद inतुमा आफ्नो शिखरमा पुगेका छन्। यो भन्न सकिन्छ कि अक्टुबरमा शरद leavesतुका पातहरूको २ प्रकारका दृश्य ठाउँहरू छन्। पहिलो होक्काइदोको डेसेट्सुजान र नागानो प्रान्तको हकुबा जस्ता हिमाली क्षेत्रका दर्शनीय स्थलहरू। यी ठाउँहरूमा, तपाईं दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ ...